Askar ku dhimatay weerar ka dhacay Sh/Hoose | KEYDMEDIA ONLINE
AWDHEEGLE, Soomaaliya - Weerar isagu jiray qaraxyo iyo mid toos ah ayaa shalay gelinkii dambe lagu qaadey Kolonyo gaadiid ah oo ay wateen Ciidanka dawladda Soomaaliya xili ay marayeen duleedka degaanka Awdheegle, ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Saraakiisha amniga gobolka ayaa sheegay in dagaalka uu dhacay kadib markii Malleeshiyaad katirsan kooxda Al-Shabaab ay jidka u galeen gaadiid sahay u wadey Ciidan uu Turkiga tababarey oo dhawaan la dejiyay saldhigyo ku yaalla Awdheegle.
Inta la xaqiijiyay 9 askari iyo tiro intaas ka badan oo Al-Shabaab ah ayaa lagu dilay dagaalka iyo qaraxyadii dhacay, waxaana sidoo kale goobta laga jiiday gaari nooca xamuulka ah oo kamid ahaa kolonyadii sahayda waday.
Taliska Ciidanka DF ayaa sheegay in uu socdo howlgal lagu baacsanayo Malleeshiyaadka Al-Shabaab, ee weerarka soo qaadey kuwaasoo u cararey dhinaca degaanada ay ku dhuumaaleystaan ee nawaaxiga Janaale.
Awdheegle ayaa kamid ah goobihii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab laha saarey dhawaan, iyadoo horey Ciidanka u qabsadeen Bariire, Janaale, Sabiid, Caanoole oo ku yaalla inta u dhaxaysa Afgooye iyo Marka.
0 Comments Topics: amisom dagaal janaale jubbaland kufsi kuntuwaarey
Warar 5 January 2021 9:43
Kenya oo loo qabtay 48 saac inay dalkeeda uga saarto Janan
Warar 23 December 2020 14:17
DF oo Ciidamo lagu soo tababarey Eritrea geysay Gedo
Warar 21 December 2020 15:33